Ama-Disneyland Bags & Backpacks: Konke Okufanele Ukwazi
I-united states California Disneyland
Izikhwama ze-Disneyland nezinsizakalo
Izikhwama Ezinhle Zosuku Lwase-Disneyland, Imithetho Nemigomo
Isikhwama sakho se-Disneyland, isikhwama, i-daypack noma isikhwama siyinto ebaluleke kakhulu oyithatha epaki. Okuphakathi kwalo kungasho umehluko phakathi kokuzijabulisa usuku nosuku ukuqubuka okuphelele.
Isikhwama ngokwaso sibalulekile. Futhi ukuthola isikhwama sakho esiphelele noma isikhwama esilula akulula. Yingakho ngilapha ukusiza. Lesi sihloko sisekelwe ekuvakasheni izikhathi eziningana ngonyaka iminyaka engaba amashumi amabili, futhi wenze zonke iziphambeko ongacabanga ngazo.
Lezi zeluleko zingakusiza ukuba ugweme ezinye noma eziningi zazo.
Into Ebaluleke Kakhulu Nge-Disneyland Bag Yakho
Gcina isikhwama sakho ohlangothini oluncane futhi umelane nesifiso sokuthatha okuningi . Uzohamba amakhilomitha amahora onke uhlala epakini. Ukugcoba isisindo esiningi kakhulu kumane kunzima. Ngibonile abantu behlupha ngaphansi komthwalo wesikhwama okufanele ulinganise amakhilogremu angu-20, abukeka bebuhlungu futhi bekhathele - futhi lokho akujabulisi kakhulu.
Esikhundleni salokho, faka izinto zakho zibe ngamapokhethi ngokuvalwa kweVelcro noma zippers. Thatha konke okuphuma esikhwameni sakho ongasidingi epakini: amakhadi esaphulelo esitolo, i-pass yakho yokuzivocavoca, i-ID yakho yomsebenzi nanoma yini enye engabalulekile.
Uma ungakwazi ukumelana nokuletha okuningi nawe, ungayithwali usuku lonke. Esikhundleni salokho, qasha ishiya bese ubeka khona lapho. Uma usendaweni yokupaka, sebenzisa i-lockers endaweni ye-plaza yokungena kalula. Beka ijaji lakho elingaphakathi lapho, kanye nokushintsha kwakho kwezingubo, amasokisi okugcina kanye nezinye izinto ozithathayo "uma kwenzeka."
Kunendlela engcono yokusingatha ukuthenga kwakho . Uma uhlala e-Disneyland Resort Hotel, ungaba nokuthenga kwakho okuthunyelwe ngqo ehhotela. Uma kungenjalo, ungacela ukuthi ungashiya kuphi amaphakheji wakho bese uwathatha kamuva ngemuva kokungena.
I-Best Disneyland Bag noma i-Backpack ngawe
Thola into ongazibamba .
Uma kungenjalo, ungaphetha njengamahloni njengomuntu owadala lo mcimbi ngo-Agasti 2016: "Abagibeli baseCalifornia Screamin 'bahlala emaminithini angu-45 ngelinye ilanga lapho isikhwama somgibeli siphume ezandleni zakhe sashada."
Kakhulu kangakanani? Isikhwama sakho kuzodingeka sifanelane nesikebhe sokugibela imoto esikhwameni esikhwameni esincane. I-Indiana Jones inendawo encane yesitoreji esincane, esincane kakhulu ngokwanele esikhwameni sokulinganisa esiphakathi uma sesigcwele isigamu.
Uhlobo luni lwebhagi olungcono kakhulu? Lokho kuxhomeke kulokho okuthandayo. Lezi ezinye zezinto okufanele uzicabangele uma ukhetha i-daypack yakho engcono kakhulu:
Mangaki amapokhethi? Ukuze uthole ngokuphepha ngokushesha, khetha okuthile ngamaphakheji ambalwa okulula ukuwabona. Amakamelo amaningi angazwakala njengombono omuhle ekuqaleni, kodwa uma ungakhumbuli lokho okufaka kuwo, kunganciphisa usuku lonke. Kunalokho, khetha amapokhethi ambalwa bese usebenzisa izikhwama ze-Ziploc ukuze ugcine izinto zihlukile.
Uma uthanda isikhwama sezithunywa , khetha eyodwa ngaphandle kwe-flap ukuze ufinyelele kalula. Isikhwama esinezihlukanisi ezimbalwa kuzokugcina ungasebenzisi isikhathi esiningi kakhulu sokumba ngaphakathi kuyo izinto.
I-Too Small ... Eningi Okukhulu ... Noma Ngakwesokudla
Uma ungumuntu omncane kakhulu : Zama isikhwama sepasipoti, umnikazi we-ID noma isikhwama esincane esinesibopho kungase kube yilokho okudingayo.
Isikhwama esinamathele angase sibe nesiphephelo kunokuyibeka ephaketheni lapho singaphuma khona, nje kuphela uma umcengezi wenziwe kahle futhi uvikelekile. Futhi kulula ukungena lapho udinga okuthile.
Abantu abaningi batusa isikhwama esincane se-Baggalini esikhwameni esinezikhwama eziningi kanye ne-zippers, igumbi lamakhadi, i-ID nemali. Nakuba kungadingeki ukhathazeke kakhulu mayelana nokweba e-Disneyland, isikhwama esifanayo se-Pacsafe crossbody sinesibambo esingenakunqunywa futhi singase sibe usizo kakhulu nxazonke - nakuba sinamapokhethi ambalwa.
Ama-backpacks namaphakethe we-fanny afika endleleni uma ugibela ukugibela. Futhi umuntu omdala ethwala isikhwama esigcwele angamshaya kalula umuntu omfishane ebusweni uma ephenduka ngokushesha kakhulu. Ezinye izivakashi ezivamile zeDisneyland zithi zihlala zithatha isikhwama - kodwa zingase zibe nomgibeli futhi akudingeki ukuthi zithwale isisindo usuku lonke.
Abanye bathi ama-backpacks ashisa kakhulu, ahlupha futhi acasula ukuba abe nokugibela.
Kulungile: Isikhwama sokulinganisa esiphakathi sithandwa sami se-Disneyland. Ungayithuthela ngaphambi komzimba wakho uma uqala ukugibela, futhi kulula ukungena ngenkathi uhamba.
Into Ebaluleke Kakhulu Ukufaka I-Disneyland Bag Yakho
Izivakashi zesikhathi sokuqala zivame ukwenza iphutha lokunamathela amathikithi abo esikhwameni esingenalutho esikhwameni sabo bese uchitha izikhathi ezimbalwa ze-panicky ezizama ukuzithola uma zidinga ukuthola i-FASTPASS noma zithumele kwenye ipaki.
Ngaphandle uma lezo tikiti zingena ephaketheni ngokwazo, zilula futhi ukulahlekelwa, ziwela lapho uthatha okunye okuvela kule pocket efanayo.
Esikhundleni sayo yonke ingozi edala ukukhathazeka, ungasebenzisa i-lanyard ukubeka amathikithi akho. Ngento encane engaphansi kwe-dorky-looking, thola ithegi yemithwalo. Udinga umuntu onokuvula okuvulekile ekugcineni ukuze ushaye izinto ngaphakathi nangaphandle ngaphandle kokukhipha umshini. Namathisela lokho esikhwameni sakho bese uyisebenzisela amathikithi nama-FASTPASSES.
I-Disneyland Imithetho Nemigomo mayelana Nezikhwama nezinsizakalo
Zonke izikhwama zingaphansi kokuseshwa. Uma uhamba ngesheke sokuphepha, bazokucela ukuthi uvule zonke izikhumba namapokhethi. Bangase basebenzise induku ukuhambisa izinto ezungeze ngaphakathi ukuze babheke kangcono lokho onakho.
Izinqubomgomo zikaDisneyland zithi amaswidi, ama-cooler noma ama-backpacks amakhulu kunama-18 "angama-25" angama-37 "avunyelwe. Ngakho-ke izikhwama ezinamasondo kwanoma yisiphi isayizi.
Yini Okunye Okumele Yithathe
Ungase uhambe ku-Disneyland uhambo lomsebenzi futhi isikhwama sakho sikwele konke okudingayo. Uma uhlala isikhathi eside futhi udinga ukwazi ukuthi ukupakisha, hlola umhlahlandlela wamantombazane kulokho okuzopakisha i-Disneyland .
Iyini i-FASTPASS e-Disneyland ne-Disney's California Adventure?
I-Disneyland Resort for Beginners: Imibuzo Evame Ukubuzwa
I-Disneyland's Soundsational Parade
INkosi uTriton Carousel
Izinto ongazi ukuthi ungayenza eDisneyland
Imisebenzi ehlobo yasehlobo e-San Antonio
Izinsuku zeqhwa zeSallow Lake City
Izindawo zokuhamba ezihamba phambili eNew York City
Indawo Yokugcina Emhlabeni Ongalindela Ukubona Iqhwa
Izindawo ezihamba phambili zase-North County zaseSan Diego
Amabhasi asePeruvia: Induduzo, Ukuvota, Izindleko Nokuphepha
I-salaverry ne-Trujillo, ePeru - eNingizimu Melika Port of Call
Izindlela Ezinhle Zokuhlala Zitholile E-San Diego
Ukuvikela Ugu lolwandle lwesiqhingi esikhulu kunazo zonke emhlabeni: i-Australia
I-Australia ne-New Zealand
Umhlahlandlela Wokuhamba kuya eSt. Thomas e-US Virgin Islands
Indlela I-Stuff isebenza ngayo - Ku-Cottage Yakho Yokuqasha Yase-UK
Indawo yokudlela edayisa ukudla kwase-Ntshonalanga e-Old Lyme, Connecticut
I-Celebrity Solstice Dining Venues